ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ပြင်သစ်စာသင်တန်းတွေက တကယ်ပဲ ဈေးကြီးသလား - Institut français de Birmanie
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ပြင်သစ်စာသင်တန်းတွေက တကယ်ပဲ ဈေးကြီးသလား
လူတိုင်း ပြောလေ့ရှိကြတာကတော့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက သင်တန်းတွေ ဈေးကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်ကြီးသလား မကြီးဘူးလား၊ တန်လား၊ မတန်လား ဆိုတာ မိတ်ဆွေများ ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ ရှင်းပြလိုပါတယ်။
တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဌာနတွေဟာ ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံတွေရဲ့ သံရုံးတွေ အောက်မှာ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
အဲဒီဌာနတွေ၊ စင်တာတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ သင်ကြားရေး နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စံချိန်စံနှုန်းဆိုင်ရာ၊ လေ့ကျင့်ပေးမှုဆိုင်ရာ၊ အရင်းအမြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွေမှာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေမှုတွေကို အမီလိုက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး လည်ပတ်နိုင်တာပါပဲ။ အဲဒီလို လည်ပတ်နေရတဲ့အတွက်လည်း အပြင်က သင်တန်းတွေနဲ့စာရင် သင်တန်းကြေး များတယ်လို့ အများက ယူဆလေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံးအောက်က ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ဘာသာစကားသင်တန်းများ၊ ပြင်သစ်-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားကြမယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုများ၊ ပြင်သစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ပြင်သစ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စာမေးပွဲများကို စီစဉ်ကျင်းပပေးလာခဲ့တာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ နှစ် ၆၀ တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
၅၅ နာရီစာ သို့မဟုတ် ၃ လစာ သင်တန်းကြေး
ဌာနရဲ့ ပုံမှန်သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းကြေးတွေကို အဆင့်ပိုင်းအလိုက် ကောက်ခံပါတယ်။ တစ်လချင်း ကောက်ခံတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ခုလက်ရှိ သင်တန်းကြေးများဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းကပင် ရှိနေတဲ့ သင်တန်းကြေးများ ဖြစ်ပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဖြစ်တဲ့ သင်တန်းများအတွက် ၁၇၆ ဒေါ်လာ ကောက်ခံပြီး ကျန်ရက်များမှာ သင်တဲ့ သင်တန်းကြေးများကို ၁၅၀ ဒေါ်လာ ကောက်ခံပါတယ်။
အဲဒီအတွက် တစ်လမှ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့ ၆၀ အကြားသာ ကျသင့်ပါတယ်။ တစ်လဆိုတာမှာလည်း အပြင်က သင်တန်းတွေမှာ တစ်ပတ် ၃ နာရီ တစ်လ ၁၂ နာရီလောက် သင်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု ဌာနက သင်တန်းတွေဟာ တစ်ပတ်ကို ၅ နာရီ တစ်လကို နာရီ ၂၀ သင်ပေးနေပါတယ်။
အပြင်သင်တန်းတွေမှာဆိုရင် တစ်ပတ်မှ ၃ နာရီ တစ်လမှာ ၁၂ နာရီကို ကျပ်ငွေအားဖြင့် ငါးသောင်းလောက် ပေးရတာ သက်သာတယ်လို့ ထင်စရာ ရှိပေမယ့် ဌာနရဲ့ တစ်လကို ၁၈ နာရီ – ၁၉ နာရီစာ သင်တန်းကြေးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းကနေ ယခုတိုင် ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့ ၆၀ အကြားသာ ဖြစ်လို့ မတိမ်းမယိမ်းပါ။ ပြဿနာက ဒေါ်လာငွေဈေး တအား မြင့်တက်သွားတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ သင်တန်းကြေး ကြီးမြင့်တယ်လို့ ထင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ကြေးအနေနဲ့ အဆင့်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ မကောက်ခံဘဲ ဥပမာ A2 ကနေ B1 တက်သွားတာမျိုး ဖြစ်မှ အဆင့်အပြည့်တစ်ခုအတွက် တစ်ကြိမ်သာ ကောက်ခံပါတယ်။ ဒါကလည်း ပါရီက ချမှတ်ထားတဲ့ စနစ်များအရ ကောက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်စာအုပ်ဆိုတာကလည်း မဝယ်မနေရ မဟုတ်ပါ။ မူရင်း စာအုပ်သုံးချင်တဲ့ သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများကတော့ ဝယ်ကြပါတယ်။
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနရဲ့ ပြင်သစ်စာ သင်တန်းတက်ရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားခွင့်တွေ ရမလဲ
ပထမအချက်က ပြင်သစ်စာ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အထူးပြု ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့၊ ခေတ်စနစ် နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ တပြေးညီ ပါရီက ချမှတ်ပေးထားတဲ့ မွမ်းမံသင်တန်းများ တက်ရောက်ထားကြတဲ့ ပြင်သစ်စာပြ ဆရာမများနဲ့ ဖိဖိစီးစီး သင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ DELF-DALF ဖြေဆိုတဲ့အခါ ပြင်ပမှ ဖြေဆိုသူများအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၃၀ ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဌာနရဲ့ သင်တန်းသားများအနေနဲ့ အဆင့်အလိုက် ၂၅ ဒေါ်လာမှ ၄၅ ဒေါ်လာအထိသာ အများဆုံး ပေးသွင်းရုံနဲ့ ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်သင်တန်းများအတွက်သာမက စာမေးပွဲ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ သင်တန်းများအတွက်ပါ ဌာနရဲ့ သင်တန်းသားများအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အထူးနှုန်းထားတွေကို ခံစားခွင့် ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုပွဲအစီအစဉ်တွေနဲ့လည်း အမြဲ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်သစ် ဘာသာစကားနဲ့သာမက ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပါ အစဉ် ထိတွေ့နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားသင်တဲ့နေရာမှာ ယဉ်ကျေးမှု အငွေ့အသက်ပါ တွဲပါရင် နှလုံးသားထဲ ပိုရောက်ပါတယ်။
ဌာနရဲ့ မင်းသားလေး စာကြည့်တိုက်ကို ဌာနအတွင်းမှာ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်ရင်လည်း တစ်နှစ်စာ အထူးနှုန်းထား ခံစားခွင့်နဲ့ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခွင့်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အားသာချက်ကတော့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ အနေနဲ့ DELF-DALF ဖြေဆိုတဲ့အခါ အဆင့်အလိုက် ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ အောင်မြင်လို့ရှိရင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ တစ်လတာ စရိတ်ငြိမ်း အပြီးအစီး ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများကို ဖိဖိစီးစီး သင်ကြားလေ့လာနိုင်အောင် နှစ်စဉ် စေလွှတ်ပေးခြင်းခံရတဲ့ အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယမန်နှစ်နဲ့ ယခုနှစ် ကိုဗစ်ကာလဆိုင်ရာ ဗီဇာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တင်းကြပ်မှု၊ DELF-DALF စာမေးပွဲကိုလည်း ၃ ကြိမ်ဆက်တိုက် ကိုဗစ် အခြေအနေများကြောင့် မကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုကြောင့်သာ လက်ရှိမှာ ဒီအစီအစဉ်ကို ခေတ္တစောင့်ကြည့်ရင်း ရပ်ဆိုင်းထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာနဲ့ တပြိုက်နက် ပြန်လည် စေလွှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနရဲ့ သင်တန်းများကို‌ တစိုက်မတ်မတ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ဘာသာစကား ထူးချွန်ကြတဲ့ သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများကို ဌာနက ပြန်လည် အားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ ဌာနရဲ့ သင်တန်းများကို တက်သင့်၊ မတက်သင့် အဖြေကိုယ်စီ ရကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဌာနအနေနဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသွားဖို့ အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားနေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျရောက်မယ့် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန မြန်မာပြည်မှာ စတင်ခဲ့တာ နှစ် ၆၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက်လည်း အစီအစဉ်ကောင်းများကို မကြာခင် တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်တစား ရှိကြလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေကြောင်း ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန မိသားစုက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
Fête de la Francophonie 2022 Rangoun
Institut français de Birmanie (IFB) and its partners celebrate French-speaking cultures and the French language! Many interesting animations and activities will take place for the
The French Institute of Myanmar is searching foracatering company to run the catering contract for its cafeteria/ restaurant.
Digital November 2021 (Novembre Numérique 2021) Institut français de Birmanie (IFB) is organising “Digital November 2021” (Novembre Numérique 2021), under the theme ofamultidisciplinary
No.340, Pyay Road, Sanchaung Township, 11111, Yangon, Myanmar
(+95)-17 53 54 28 / 53 69 00 / 53 71 22
(+95)940 65 96 611
For Students Registration (TUE-SAT)
(+95)926 26 11 43 8
No.340, Pyay Road, Sanchaung Towpship, Yangon
(+95) 17536 900 / 537 122 / 535 428
For Students' Registration